laba shaqaalaha reer Zimbabwe ah oo uu toogtay madaxa Shiinaha - TELES RELAY
laba shaqaalaha reer Zimbabwe ah oo uu toogtay nin Shiine ah
Toogashada laba ka mid ah shaqaalaha reer Zimbabwe waxaa qoray nin shiine ah wuxuu muujiyaa "xadgudubyada nidaamsan iyo baahsan" ee ay dadku kala kulmaan hawlgallada macdanta Shiinaha, ayaa sidaas yidhi Ururka Sharciga Deegaanka ee Bulshada (ZELA).
War qoraal ah oo ka soo baxay maxkamadda, booliska ayaa lagu sheegay in Zhang Xuen uu ku dilay qof shaqaale ah shan jeer mid kalena ku dhaawacay miinada uu ka wado bartamaha Gweru ee dalka Zimbabwe iyada oo muran uu ka dhexeeyo. shaqaalaha mushaarkooda ka sareeya.
Zhang waxaa lagu soo oogay dacwad isku day dil, afhayeenka booliiska Zimbabwe Paul Nyathi ayaa yidhi.
sida laga soo xigtay warbixinnada warbaahinta gudaha , Zhang ma uusan barinin maxaa yeelay ma jirin maxkamad turjubaan shati leh. Wuxuu ku sii jiri doonaa xabsiga illaa ugu yaraan 7-da Luulyo, ayaa lagu yiri warbixinta.
Toogashadu waxay dhacday subaxnimadii Axadda markii macdan qodaha Kenneth Tachiona uu wajahay Zhang ka dib markii uu diiday inuu bixiyo mushaarkiisa doollarka Mareykanka, sida lagu heshiiyay.
Sida ku xusan warqadda dhaarta ah, Tachiona wuxuu xirmay Zhang, oo markaa hubkiisii ​​qaatay, oo ku toogtay shaqaalaha seddex jeer bowdada midig iyo laba jeer bidix.
Booliska ayaa sheegay in Zhang uu toogtay mid kale oo toogtay shaqaalaha taasina ay ku dhacday in mid ka mid ah rasaasta uu taabtay garka xubin kamid ah shaqaalaha. Shaqaalaha dhaawacan waxaa lagu daaweynayaa isbitaal gaar loo leeyahay.
Muuqaal ay dad badani ku andacoonayaan inuu ahaa dhacdada ayaa lagu faafiyay warbaahinta bulshada ee Zimbabwe, taasoo ka careysiisay xanaaqa dadweynaha waxayna ka soo yeertay koox maxalli ah si ay dib ugu qiimeeyaan howlgalada macdanta Shiinaha ee ka socda dalkaas.
Safaaradda Shiinaha ee dalka Zimbabwe ayaa ku tilmaantay toogashadu inay tahay dhacdo go'doon ah waxayna sheegtay inay taageerto baaritaan furan oo hufan oo ay wadaan masuuliyiinta maxalliga ah.
Tallaabo kasta oo sharci-darro ah oo suurtagal ah iyo qof kasta oo sharciga jabiya waa in aan la ilaalin. Shiinaha iyo Zimbabwe ayaa leh xidhiidh saaxiibtinimo iyo iskaashi muddo dheer soo jiray. Waxaan ugu baaqeynaa dhammaan dhinacyada ay qusayso inay ilaashadaan masayrkiisa oo si taxaddar leh ay u ilaashadaan ”, Safaaradda Shiinaha ayaa bayaan ay ku soo qortay barteeda Twitterka.
Wasaaradda arrimaha dibedda Shiinaha ayaa u sheegtay CNN, “Guud ahaan, ganacsatada Shiinaha ee Zimbabwe waxay ka ganacsadeen ganacsigooda si waafaqsan shuruucda iyo qawaaniinta maxalliga ah waxayna kaalin wanaagsan ka qaateen horumarka dhaqaalaha iyo bulshada ee Zimbabwe.
"Waxaan xushmeyneynaa sida ay ula dhaqmayaan kiiska Zimbabwe iyada oo la raacayo sharciga, laakiin isla mar ahaantaas waxaan rajeyneynaa in Zimbabwe ay ilaaliso amniga iyo xuquuqda iyo danaha sharciga ah ee muwaadiniinta Shiinaha. Waxa jira xidhiidh saaxiibtinimo oo soo jireen ah oo ka dhexeeya labada dal waxaanan aaminsanahay in labada dhinacba ay awood u siinayaan inay si fiican u maareeyaan kiiskan si sax ah. "
Shiinaha ayaa ah maal-gashadayaasha shisheeye ee ugu weyn Zimbabwe oo dano weyn ka leh waaxda soosaarka dalka.
Sannadkii hore, shirkadda Shiinaha ee Tsignchan ayaa saxeexday a $ 2 bilyan oo heshiis ah oo ay la socoto Wasaaradda Macdanta ee Zimbabwe si loo soo saaro chromium, iron ore, nickel iyo dhuxul, ilaha muhiimka u ah Shiinaha.
Sida lagu sheegay warbixin 2016 ka soo baxday Hay'adda Brookings Institution, at ugu yaraan 10000 oo Shiinees ah ayaa ku sugan Zimbabwe waxbadan oo ka shaqeeya macdanta dalka, isgaarsiinta iyo warshadaha dhismaha si ku saleysan qandaraas.
Laakiin joogitaankooda dalka ayaa mararka qaar muran badan dhaliyay.
Labada macdanta Shiinaha ee dalka iyo howlihii qodista ee gobolka ayaa lagu eedeeyey ku xadgudubka xuquuqda aadanaha iyo tallaabooyinka amniga ee liita ee shaqaalaha.
Bishii Febraayo, koox ka mid ah macdan qodayaasha maxalliga ah ee koonfurta South Matabeleland weydiiyay maxkamad shaqaale si ay uga mudaaharaato cayrinta shaqaalahooda Shiinaha.
Shaqaalaha hawlgal kale oo qodista shiinaha oo ka socda gobolka bishii Abriil ee la soo dhaafay ka cawday inay ka hooseyso - mushahar la siinayo oo shaqeeya iyada oo aan la haysan dhar ilaalin.
ZELA waxay hada baaraysaa kiisas dhowr ah oo macdan qodista Shiinaha ay diidayaan inay bixiyaan mushaharka ama inay siiyaan dhar ilaalin shaqaalahooda, qaasatan inta lagu guda jiro aafada musiibada 'Covid-19', sida laga soo xigtay kuxigeenka agaasime Shamiso Mutisi
Waxay noqotay tusaale iyo nidaam. Waxaan leenahay kiisas ay carruurta yaryar si xun ula dhaqmaan, garaacaan oo ay ku takooraan carruurta Shiinaha, ”ayuu yiri Mutisi.
Bayaan ay soo saartay Arbacadii, ZELA ayaa lagu sheegay in dadka deggan meelaha qaar ka mid ah miinooyinka Shiinaha ay badiyaa ka shaqeeyaan "khatar, adag oo nafta halis gelisa" , halka si liidata loo siiyay waqtigooda.
Toogashada Axadda ayaa ah sabab kale oo ay dawladdu dib uga fikirto ballanqaadyadeeda siyaasadeed iyo dhaqaale ee Shiinaha, kooxda ayaa tidhi.
"Meelo badan oo Afrika ah, oo ay kujirto Zimbabwe, maalgashadayaasha Shiinaha ee qeybta macdanta waxay muujiyeen taariikh amni xumo, caafimaad, deegaan, shaqo iyo heerarka xuquuqda aadanaha", waxay cadeyneysaa war-saxaafadeedka.
CNN ayaa la soo xiriirtay Wasaaradda Arimaha Dibadda Shiinaha si ay faallo uga bixiso.
24 mayd ayaa laga helay miinada dahabka daadadku ku daadatay ee Zimbabwe
Jaaliyada Shiinaha ee Gweru ayaa iska fogeysay dhacdadaas dhawayd waxayna balanqaaday inay bixin doonto biilasha caafimaadka shaqaalaha dhaawacmay ayna ku taageeri doonto qoysaskooda wax ka qabashada dhibaatada.
Jaaliyadda Shiinaha ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dhacdadaasi aysan ka turjumaynin habdhaqanka xubnaheeda, isla markaana ay shaqaaleeyeen shirkadda si ay magdhow u siiso shaqaalaha.
Bayaanka ayaa lagu yiri, "Waxaan si dhab ah u rajeyneynaa in saaxiibtinimadeena iyo iskaashiga u dhexeeya labada dal iyo labada shacbi ayan wax u dhimi doonin dhacdadan go'doonsan, taas oo aan ka turjumaynin dhaqanka dhammaanteenna ah bulshada Shiinaha," ayaa lagu yiri bayaanka.
Maqaalkani wuxuu ugu horeyn u muuqday: https://edition.cnn.com/2020/06/27/africa/zimbabwe-mine-shooting-intl/index.html
Iibinta dhallaanka ee internetka on Instagram Saddex nin ayaa la qabtay
Waa tan sababta adduunku ugu baahan yahay fayrasyo ​​ay ku shaqeeyaan